Madaxweynaha Puntland Oo Ku Dhawaaqay Golaha Wasiiradda Xukuumadda Cusub | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Madaxweynaha Puntland Oo Ku Dhawaaqay Golaha Wasiiradda Xukuumadda Cusub
Published on August 7, 2017 by sdwo · No Comments
Garoowe (SDWO): Madaxweynaha maamul goboleed Puntland Cali Maxamed Cali Gaas, ayaa maanta ku dhawaaqay golaha wasiirradda cusub ee xukuumadiisa, kadib markii 18-kii bishii hore baarlamaanku kalsoonida kala noqdeen xukuumadda.
Golahan wasiirradda cusub ee xukuumadda uu soo dhisay madaxweyne Gaas ayaa tiradoodu gaadhaysaa 53 xubnood, oo isugu jira wasiirro, wasiir ku-xgeeno iyo wasiiru-dawleyaal.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed laga ka soo baxay madaxtooyadda Puntland ee magaaladda garoowe.
Xukuumadan cusub ee madaxweynaha Puntland maanta ku dhawaaqay ayaa la sheegay in ay ku jiraan 4 xubnood oo haween ah. waana markii u horaysay oo haweenku tirro intaa le’eg ku yeeshaan xukuumadda Puntland.
Tiradan 53 xubnood ah ee golaha wasiirrada ayaa ka kooban 20 wasiir, 19 wasiir ku-xigeen iyo 14 wasiiru-dawle, kuwaasi oo wadarta guud ee tiradoodu noqonayso 53 wasiir.
Sidoo kale waxa la sheegay in ay ka mid yihiin xubno hore uga tirsanaan jiray golihii wasiirrada ee bishii hore baarlamaanku kalsoonidda kale noqday, taasi oo su’aal gelinaysa in baarlamaanku uu ansixin doono iyo in kale.
Golahan wasiirradda Puntland ee madaxweyne Cabdi-weli Gaas maanta soo saaray ayaa maalmahanba si weyn looga sugayay degaamadda Puntland. Inkastoo ay ka dhex muuqdaan wasiirro ka mid ah xukuumadii hore ee baarlamaanku riday.
Dhinaca kale xukuumaddii madaxweyne Gaas ee baarlamaanka Puntland uu 18-kii bishii July codka kalsoonidda kala noqday qodobadii ay u cuskadeen kala diristooda waxa ka mid ahaa in xukuumadu ku guul-daraysatay wax ka qabashadda amniga, dhaqaalaha iyo arrimo kale .
Waxa kale oo ka mid ahaa arrimaha ay baarlamaanku u daliishadeen in xukuumadaasi ay ku fashilayntay in ay abuuraan hanaan dhaqaale, bixinta mushaharooyinka ciidamadda iyo shaqaalaha dawladda iyo in ay sameeyeen musuqmaasuq baahsan.
Hase yeeshee, golahan wasiirrada cusub ee uu maanta soo dhisay Cabdi-weli Gaas, oo ay ku jiraan xubno ka tirsanaan jiray xukuumadii baarlamaanku riday bishii hore, kuwaasi oo xilalkii ay markii hore hayeen laga bedelay.